शा,री,रिक सम्बन्ध राख्दा ‘डि,स्टर्ब’ गरेपछि …..३ वर्षकी छोरीको आमाले ह,,त्या गरिन्….!
आमालाई बच्चाको सबैभन्दा नजिकको व्यक्ति मानिन्छ । तर बेलायतकी एक महिलाले आफ्ना प्रेमीसँग शा,री,रिक सम्बनधमा कुनै बाधा नहोस् भनेर आफ्नी ३ वर्षकी छोरीको ह,त्या गरेकी छिन् । ह,त्या आ,रोपमा महिलालाई १५ वर्ष र उनका प्रेमीलाई १४ वर्षको जे,ल स,जाय सुनाइएको छ ।
बेलायतमा गत वर्ष ९ अगस्टका दिन काइली जायदे प्रिस्ट नामकी ३ वर्षकी बालिका मृ,त भेटिएकी थिइन् । उनको छाती र पेटमा चो,ट पाइएको थियो ।बालिकाकी आमाले ९९९ मा फोन गरेर पुलिसलाई यसको जानकारी दिएकी थिइन् । अधिकारीहरुले जाँचको क्रममा बालिकाको ह,,त्या आमाले नै गरेको पाएका थिए ।
अदालतले बालिकाकी आमा र उनका २२ वर्षका प्रेमी क्यालम रेडफर्नलाई दोषी ठहर गरेको छ । डेलिमेलका अनुसार महिलाले आफ्ना प्रेमीसँग शा,री,रिक सम्बन्ध राख्न खोज्दा छोरी बाधा बनेपछि महिलाले उनको ह,,त्या गरेकी थिइन् ।महिलालाई ह,त्या आरोपमा १५ वर्ष र बालबालिकामाथि क्रु,रताको आ,रोपमा ३ वर्ष जे,ल स,जाय सुनाइएको छ । उनका दुवै स,जाय एकसाथ चल्नेछन् ।
Previous दु:खद खबर मोटरसाइकलको ठ’क्क’रबाट इ’न्सपे’क्टर क’पिलको मृ,त्यु
Next शा,री,रिक सम्बन्ध राख्दा ‘डि,स्टर्ब’ गरेपछि …..३ वर्षकी छोरीको आमाले ह,,त्या गरिन्….!